တရုတ်ရထားထုတ်လုပ်သူများက စွမ်းအင်အသစ်သုံး အပေါ့စားမီးရထားများအား Jujuy ပြည်နယ်အတွက် ထုတ်လုပ်မည် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ကျီလင်ပြည်နယ် ချောင်ချွန်းမြို့တွင် CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd မှ မြန်နှုန်းအလယ်အလတ်မှ အနှေးအဆင့်ရှိသော ရထားအား ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှ စမ်းသပ်နေသည်ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၂၉ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရှီးကျားကျွမ်း၊ မေ ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အဓိက မြန်နှုန်းမြင့်ရထားထုတ်လုပ်သော CRRC Tangshan ကုမ္ပဏီလီမိတက်က အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ Jujuy ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များနှင့် စွမ်းအင်သစ်အသုံးပြု အပေါ့စားမီးရထား စီမံကိန်းအား မေ ၆ ရက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။တရုတ်နိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်သစ်အသုံးပြု အပေါ့စားရထားများကို အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုခြင်းလည်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဝင်ရိုး ၆ ခုပါသော ရထားသည် အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ ၆၀ ဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်ပြီး အများဆုံး ခရီးသည် ၇၂ ဦး လိုက်ပါစီးနင်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ရထားအစွန်းနှစ်ဖက်စလုံးတွင် ရထားမောင်းသူထိုင်သည့်နေရာပါရှိခြင်းကြောင့် နှစ်ဘက်စလုံးမှ မောင်းနှင်နိုင်သည်ဟု ကုမ္ပဏီက ဆိုသည်။
အဆိုပါမီးရထားသည် လက်သီယမ် ဘက်ထရီ မောင်းနှင်းမှု နည်းပညာကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး ရထားအတွက် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် Jujuy ပြည်နယ်ရှိ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် အရင်းအမြစ်များကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းပြည်နယ်၏ ရှုမျှော်ခင်းကြည့်ရှုရေးလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် နည်းပညာဖလှယ်မှု၊ ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေးနှင့် မီးရထားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို Jujuy ပြည်နယ်ရှိ ဆက်စပ်သောအဖွဲ့များနှင့် အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ အထွေထွေမန်နေဂျာ Tan Mu က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းသည် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံနှင့် တောင်အမေရိကတိုက်တစ်ဝန်း စွမ်းအင်သစ်အသုံးပြု အပေါ့စားမီးရထားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်း Jujuy ပြည်နယ် ၏ မြို့တော်ဝန် Gerardo Morales က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
၎င်းတရုတ်ကုမ္ပဏီ၏ ဒီဇယ်စွမ်းအင်သုံးရထားများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသို့ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Chinese train maker to produce new-energy light rail trains for Argentina’s Jujuy
SHIJIAZHUANG, May7(Xinhua) — CRRC Tangshan Co., Ltd.,amajor Chinese high-speed train manufacturer, announced the signing ofanew-energy light rail train project with authorities of Jujuy Province of Argentina on Friday.
This marks the first time that China’s new-energy light rail trains are to be used by Argentina’s transport system.
In 2015, the Chinese company’s meter-gauge diesel multiple-unit train rolled off the production line and was sent to Argentina by sea. Enditem
တရုတ်သံရုံးကို နေတိုးအဖွဲ့က ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုကို တရုတ်နိုင်ငံက ဘယ်သောအခါမှ မေ့လျော့မည်မဟုတ်ဟု ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပြော
အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၏ COVID-19 လူနာ အရေအတွက် ၃ သန်းကျော်ထိရှိလာ